Ý nghĩa cây thủy tùng trong phong thủy? Đặc điểm, tác dụng, kỹ thuật trồng và chăm sóc | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Ý nghĩa cây thủy tùng trong phong thủy? Đặc điểm, tác dụng, kỹ thuật trồng và chăm sóc | Hatgiongtihon.net
Đang Đọc: Ý nghĩa cây thủy tùng trong phong thủy? Đặc điểm, tác dụng, kỹ thuật trồng và chăm sóc | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
Umthi we-yew ngumthi onqabileyo, omhle kwaye oxabisekileyo. Nangona zininzi iintlobo ezahlukeneyo, i-yew yetafile encinci yeyona idumileyo. Inqaku elilandelayo liza kukunceda ufunde intsingiselo yomthi we-yew kwi-feng shui eneempawu zayo, iziphumo, ukutshala kunye nobuchule bokunyamekela ngokusebenzisa inqaku elingezantsi.
Bona Okuninzi: I-TOP 12 yemithi emihle yepine eVietnam
1 Yintoni umthi yew?
2 Intsingiselo yomthi we-yew kwi-feng shui
3 Iimpawu zeyew
4 Ingaba i-yew inazo iintyatyambo?
5 Iintlobo zeyew
5.1 Yew eluhlaza
5.2 Yew ebomvu
5.3 Yew umthi yenaliti
6 Uyintoni umphumo womthi we-yew?
6.1 Isetyenziselwa ukugawulwa kwemithi
6.2 Ukwenza izityalo zokuhombisa
6.3 Ukuhlanjululwa komoya kunye nokuphilisa
7 Indlela yokukhulisa imithi yew
8 Indlela yokunyamekela yew
8.3 Umhlaba wokutyala
9 Ixabiso lomthi wew
10 Ezinye iisampulu yew phezu kwetafile, bonsai entle
Yintoni umthi yew?
Umthi we-yew, okwaziwa ngokuba yi-water pine, eyaziwa ngokwesayensi njenge-Glyptostrobus pensilis, ngumthi wosapho lwe-conifer. Ivela kwimimandla yeTropiki yaseMazantsi-mpuma eTshayina. Okwangoku, umthi ukhule kwiindawo ezininzi eVietnam kwaye ugxile kumaphondo asezantsi.
Esi sisityalo esithe tye, esinemithi. Umthi womthi ulungile kakhulu, unamandla kwaye uqinile, ngoko wawusetyenziswa yiBritani ukwenza izaphetha kunye neentolo kwixesha elidlulileyo. Inani lezi zityalo endle ngoku linqabile kakhulu kwaye linexabiso eliphezulu. Nangona kunjalo, izazinzulu ziye zafumana indlela yokusasaza i-yew ngempumelelo ngo-2011. Ngokufakela amahlumela kwi-hibiscus yomthi okhulayo, imithi emincinci ye-yew ikhuliswa kakhulu namhlanje njengesityalo setafile.
Intsingiselo yomthi we-yew kwi-feng shui
Iphuma kwintsapho ye-conifer, i-yew nayo ineentsingiselo eziqhelekileyo zale mithi. UTung ngumthi omde onamandla owomeleleyo. Umfanekiso wakhe othe tye kwaye unzima kufuneka ufaniswe nomntu ohloniphekileyo. Umthi ufuzisela ubunyulu, ingqibelelo, kwaye awuzithobi, ngoko ufanelekile kubanikazi bamadoda.
Imithi ye-quartet Tung – Truc – Cuc – Mai iphezulu kwakhona, ngoko ayinakuncedwa ukuba lo mthi oxabisekileyo. Ngexesha le-feudal, umthi wepine wawungumthi oqhelekileyo ofumaneka kwiintsapho zamamandarin kunye nezikhulu ezinodumo kunye nobutyebi. Ngoko ke, umthi wompayina uthwala kuwo igesi exabisekileyo kwaye uzisa ubuhle kunye nesimilo esihle kumlimi.
I-Yew kwindalo isityalo esiphakathi phakathi komhlaba kunye namanzi, ngoko inentsingiselo yokuvisisana ngokwayo. Sinokubona ukuzinza komhlaba kunye nokuguquguquka kwamanzi kwindawo ye-yew. Ke inentsingiselo entle kakhulu kwizinto ezintlanu ze-feng shui.
Ukuhlala kwindawo ekufuphi nemilambo namachibi, rhoqo xa kunetha, imithi iya kufuneka ithwale imvula yokuqala kunye nomoya. Nangona kunjalo, umthi usamile kwaye ulungele ukujongana nesiphango ngasinye. Umthi we-yew uquka isifundo kubantu malunga nokunyamezela kunye nokunyamezela phezu kobunzima kunye nemingeni yobomi.
Kwizinto ezintlanu zamazwe asempumalanga, iinaliti zasemanzini. Ngoko ukutyala lo mthi kuya kunceda umlimi avune ubutyebi kunye nobutyebi. Ngokukodwa ukuba utyala umthi we-yew endlwini, inhlanhla yomninimzi iya kuba yinto eninzi kwaye iphumelele.
Njengesityalo esingapheliyo, umthi wepine kwi-feng shui umele impilo kunye nokuphila ixesha elide. Abantu bakudala babekholelwa ukuba ukutyala umthi omdala weyew ecaleni kwendlu kuya kunceda amalungu osapho aphile ixesha elide. Umnikelo walo mthi ubonwa njengomnqweno wobomi obude nobunempilo kummkeli.
Iinaliti zeDesktop yew zineziqu ezibhityileyo kunye namagqabi achumileyo, adlamkileyo. Nangona kunjalo, i-trunk ayinamandla njengoko ibonakala, kodwa ithambile kwaye ihlala ihlala njalo. Ukususela ngoko, abantu abaninzi baye bafunda ubuhle ekuthobekeni kunye nokulula ngaphandle, kodwa eqinile kwaye eqinile ngaphakathi.
Umthi we-yew unobungakanani obukhulu ngokufanelekileyo, isiqu singaphezulu kwe-30m ukuphakama kunye nobubanzi obungange-1m. Ixolo lingqindilili, linemingxuma kancinane, kwaye lineentanda ecaleni kwesiqu. IYew yenye yeenkuni ezikumgangatho ophezulu kwihlabathi. Ukhuni oluqinileyo, akukho ntubi, i-warping, ivumba elimnandi kunye neenkozo zomthi ezigudileyo. Sithetha nje kumahlathi ashinyeneyo lo mthi usengozini yokuphela ngenxa yokuzingela ngokungekho mthethweni.
IYew ngokwendalo ngumthi ovuthulukayo onamagqabi agxile kumzimba ongaphezulu. Amagqabi aneendlela ezi-2 ezahlukeneyo ezine-awl kwisebe lezityalo kunye ne-scaly kwisebe lokuzala. Apho amagqabi amile okwe-awl made kwaye aphalala ngakumbi kwixesha elomileyo. I-Yew ineoli eninzi ebalulekileyo enevumba elimnandi elenza ukuba iinkuni zalo mthi zibe phezulu.
Umthi weTafile yew sisihlahla, esincinci kakhulu ngobukhulu. Amasebe amancinci anokwakheka okubhityileyo, akhula amaninzi kwaye made ukuya phezulu. Nangona ibonakala ibuthathaka kakhulu, i-trunk iqinile kwaye yomelele, ngoko akulula ukuphuka. Iingcambu zikhula ngokukhawuleza, zinde kwaye zomelele, ngoko ke isityalo sifunxa amanzi kakuhle kakhulu. Ngokwe-avareji, umthi uya kukhula ukuya kwi-30cm ubude kunye nesiqu esincinci se-0.6-3mm.
Amagqabi amile ngonxantathu, angqindilili, kwaye zombini isiqu kunye namagqabi aluhlaza bumnyama ngombala. Amagqabi eDesktop yew akhula kakhulu phezulu komthi ajikeleza edala indawo entle.
Ingaba i-yew inazo iintyatyambo?
Imithi yompayina etafileni ayifane idubule kwaye idinga ukhathalelo oluninzi xa inikwa iimeko ezifanelekileyo. Ngokuqhelekileyo imithi emikhulu ekhula endle iya kuba neentyatyambo. Iintyatyambo zeYew zikhula zibe ngamaqela amancinci akhula ukusuka phezulu kwemithi. I-inflorescence nganye iya kuba neentyantyambo ezimhlophe ezi-1-4 ezidityanisiweyo. Xa iintyatyambo zibunile, ziya kuvelisa iicones ezincinci, ezimnyama zepine.
Ngokwendalo, esi sisityalo somthi esikhulu. Imithi yemithi yohlulwe yazintlobo ezimbini, i-yew eluhlaza kunye nebomvu. Ngokusisiseko, ukwakheka kwazo zombini ezi zityalo ziyafana, kodwa ngenxa yeemeko ezahlukeneyo zokusingqongileyo, zineyantlukwano. Apho i-yew eluhlaza inomgangatho ongcono, ngoko inexabiso eliphezulu kuneyew ebomvu.
I-yew eluhlaza idla ngokuba sisityalo esingcwatywa eludakeni ixesha elide, ukuya kuthi ga kwikhulu leminyaka. Ngombulelo wokuvezwa kwindawo efumileyo, umthi womthi uguqulwa ube ngumbala omhle kunye nomgangatho omhle oluhlaza obumnyama. Umthi weyew unemithambo emihle nombala owahlukileyo owenza ube ngumthi oxabiseke kakhulu.
Okwangoku, esi sityalo sisetyenziswa ngokugqithisileyo, nto leyo ekhokelela ekunqongopheni kwaso endle. EVietnam, umthi we-yew oluhlaza uvela ikakhulu kwiindawo ezinzulu kwi-Central Highlands kunye nezinye iindawo zokugcina amandla ombane. Ngoko ke, inkqubo yokufumana kunye nokuxhaphaza lo mthi inzima kakhulu.
I-yew ebomvu ihlala kwindawo ezomileyo emhlabeni. Umgangatho womthi ulungile, obomvu okanye umdaka omnyama kunye nemithambo emincinci. Nangona i-yew ebomvu ingaphantsi kwexabiso eliphantsi kunohlaza, isabiza kakhulu kwaye idumile, ngoko iphinde isetyenziswe ngokugqithiseleyo.
Umthi we-yew obomvu ongapheliyo kunye nemithambo emihle
Yew umthi yenaliti
Inaliti yew ithandwa kakhulu kwaye ityalwe ngokubanzi, ifanelekile itafile kwaye inentsingiselo ye-feng shui enhle. Esi sisihlahlana esincinci, esimalunga ne-30cm ubude. Ngokubonakala okuhle kunye nokulula ukukhula, iinaliti ze-yew zisetyenziswa njengesityalo sokuhlobisa endlwini.
Okwangoku, ngumthi wedesktop obonakala kakhulu namhlanje kwaye uyathandwa. Umthi unemilo encinci, isiqu esibhityileyo esinamagqabi aluhlaza acikizekileyo anexabiso eliphezulu lobuhle. Olu hlobo lomthi lusasazeka ngokukhawuleza, ngoko lo ngowona mthi we-yew obonakala kwimarike yebhonsai.
Uyintoni umphumo womthi we-yew?
Isetyenziselwa ukugawulwa kwemithi
Abantu abaninzi bayazibuza ukuba yintoni ukusetyenziswa kwemithi ye-yew ebiza kakhulu. Esi sisityalo sobungakanani obukhulu esinomgangatho olungileyo, ngoko sisixhobo esilungileyo sokwenziwa kweshishini lokugawulwa kwemithi. Umgangatho wawo womthi uphakathi kweendawo eziphezulu kwihlabathi ngenxa yezinto ezininzi ezinje: iinkozo zomthi ezigudileyo, iinkozo ezintle, azinazo iintubi, ivumba elimnandi, njl. njl. ixabiso eliphezulu.
Ngokutsho kweengcali zenzululwazi, iyew wood inempembelelo yokufunxa impumelelo nokukhupha igesi embi kakuhle kakhulu. Ke ngoko, abantu bahlala besebenzisa esi sityalo ukwenza imifanekiso eqingqiweyo okanye ihyacinths. Ezi zinto kuthiwa zizisa amathamsanqa, uxolo nempumelelo kumniniyo.
Nangona kunjalo, kungenxa yexabiso eliphezulu lomthi oye wew endle uye waxhatshazwa ngokungekho mthethweni kakhulu. Okwangoku, inani lemithi endle kwilizwe lethu lincinci kakhulu kwaye lifuna ukulondolozwa ngokukhawuleza. Ehlabathini, esi sityalo sikwahlelwa njengeentlobo zezityalo ezisengozini.
Ukwenza izityalo zokuhombisa
Umthi omncinci we-yew wedesktop ukhuliselwa ubungakanani obuncinci kodwa ubuninzi kwaye uthandwa kakhulu kwilizwe lethu. Esi sisityalo esithandwayo sokuhlobisa kumaxesha amva nje. Ngesimo sayo esihle kunye nesiqu esincinci, i-yew inokubekwa kwiindawo ezifana namagumbi okuhlala, iiofisi, amagumbi okulinda, njl. Umthi we-bonsai yew uyathandwa ngabaninzi bemithi ye-aficionados kwaye uzuze indawo kwingqokelela yabo yemithi.
Ukuhlanjululwa komoya kunye nokuphilisa
Njengo-ivy, i-yew sisityalo sokucoca umoya. Izityalo zinokufunxa iigesi eziyityhefu emoyeni, kwimitha ye-electromagnetic kunye nothuli. Ngelo xesha, izityalo zikhupha i-oksijini kwaye zifake i-CO2, ngoko umoya wegumbi uya kuba upholile kwaye uhlaziye.
Esi sisityalo sonyango esiluncedo kakhulu. Oogqirha basebenzisa amasetyana e-yew avuthiweyo kunye neecones kunyango lweentlungu, isifo samathambo kunye nokuqiniswa kwesikhumba. Ifenitshala eyenziwe ngomthi we-yew enomgangatho ophezulu kakhulu kwaye ixabiso linqabile kwimarike.
Indlela yokukhulisa imithi yew
Ngegama elikhethekileyo, abantu abaninzi bacinga ukuba esi sisityalo sasemanzini. Nangona kunjalo, ikhuliswa kwimihlaba emininzi kunye neendawo ezomileyo. Umthi we-yew sisityalo esinzima ukukhula kwaye sidinga ubuchule obuninzi. Iimeko ezifanelekileyo zokusasazwa kwezityalo nazo zifuna ukuba ingcali iqhube.
Okwangoku, abantu basasaza kakhulu izityalo ngokuxutywa kwi-hibiscus ngezinga lempumelelo ye-70%. Ke endaweni yokuzikhulisela ngokwakho, kufuneka nje uthenge izithole kwivenkile yezithole ezilula kwaye zilungele.
Bona Okuninzi: Ukhula njani imithi yepine exutywe lula
Indlela yokunyamekela yew
I-yew yedesktop ikhula kakuhle kwiqondo lobushushu eliphakathi kwe 18-25 degrees celcius.Ukuba uyigcina kwigumbi eline air-conditioning, qiniseka ukuyikhupha elangeni iiyure ezimbalwa kusasa ukuze ingachaphazeleki. Nceda. Ukongeza, iindawo ezikufutshane nemingxuma yokuphefumla kunye nemingxuma yokukhupha umoya we-air conditioner nazo azivumelekanga ukubeka imithi.
I-Yew sisityalo esithanda umthunzi esinokukhuliswa ngaphakathi nangaphandle. Xa utyala, qaphela kwaye ulungelelanise indawo yomthi ukuqinisekisa ukukhanya okwaneleyo kwi-photosynthesis ngaphandle kokubuna ngenxa yokutshiswa lilanga.
Ngokukhanya kombane kuphela, umthi unokuphinda uqhube i-photosynthesis kwaye ukhule kakuhle, ngoko i-yew ifanelekile kwiindawo ezininzi endlwini. Ukuba igumbi limnyama kakhulu, kufuneka ukhuphe isityalo ekukhanyeni amaxesha ambalwa ngeveki ukuze isityalo sibe nokukhanya okwaneleyo kwi-photosynthesis.
Ukuze i-yew ibe nempilo kwaye ibe luhlaza, umhlaba wokutyala kufuneka uhlale unesondlo kwaye une-porous. Abalimi banokusebenzisa zonke iintlobo zomhlaba, umhlaba wegadi oxutywe nomgquba, isichumiso seNPK ukukhulisa izityalo. Vundisa umthi kanye ngonyaka ukugcina umhlaba ungaguquguquki.
Endle, imithi yeyew ihlala ecaleni kwemilambo namachibi. Ngoko ke, imfuneko yamanzi kwisityalo iphezulu kunezinye iintlobo zemithi. Kunconywa ukuba ngamaxesha athile unkcenkceshele izityalo imihla ngemihla ngexabiso elilinganiselweyo ukwenzela ukuba izityalo zikhule kakuhle ngaphandle kokunqongophala kwamanzi okanye ukuchithwa kwamanzi.
Kwiintsuku ezishushu zasehlotyeni, isityalo siya kunyuka ngakumbi, ngoko ke imfuno yamanzi iyanda. Abalimi kufuneka bankcenkceshele inkungu yonke imihla ukuqinisekisa ukufuma komhlaba kunye nokupholisa izityalo. Ngokuchasene noko, ukuba isityalo sikwigumbi elibandayo okanye ebusika, ukusetyenziswa kwamanzi kweyew kuya kuncipha. Ngoko ke, kunokwenzeka ukugcina amanzi okunkcenkceshela ixesha ngalinye ukuphepha amanzi amaninzi.
Umthi weyew kufuneka ujongane nezifo ezinje ngokuba tyheli kwamagqabi, amagqabi omileyo, kunye nokuwa kwamagqabi. Ungasinyanga isityalo ngokwakho ngokusika iindawo ezosulelekileyo ukuthintela ukuba la malungu angosuli isityalo siphela. Kwimeko apho umthi ugula kakhulu kwaye amasebe amaninzi anesifo kunye namagqabi, kuyacetyiswa ukuba uthenge iyeza elikhethekileyo lomthi kwivenkile ekhethekileyo yekhemesti.
Esi sisityalo esihlala sikhulela ngaphakathi, ngoko ke asikhuselekanga kwizinambuzane kunye nezifo kunezinye izityalo ezihonjisiweyo. Ngoko ke, kungcono ukunciphisa ukusetyenziswa kwezibulali zinambuzane ukuba akukho mfuneko kuba yonakalisa umhlaba kwaye inokuba yingozi ebantwini.
Ixabiso lomthi wew
Umthi weYew unqabile kakhulu, ngoko ke ixabiso liphezulu kakhulu, malunga ne-300 yezigidi ze-VND nge-cubic meter yomthi. Nangona kunjalo, esi sityalo endle sisekupheleni kokuphela, ngoko ke ixabiso lokwenene lixhomekeke kwinkqubo yentengiselwano yamaqela amabini.
Isasazwa ngendlela enzima ngakumbi kunezinye izityalo zokuhlobisa, ixabiso eliphezulu le-yew yokuhlobisa ayinakuphepheka. Ngokuqhelekileyo, ixabiso lemithi ye-yew yokuhlobisa liya kuvela kwi-200-500 lamawaka e-VND. Nangona kunjalo, ngobuhle bayo kunye nentsingiselo ye-feng shui, indawo ye-yew isaxabisa ixabiso.
Ezinye iisampulu yew phezu kwetafile, bonsai entle
Umthi weYew onamagqabi abanzi nachumileyo
Umthi we-yew wasemanzini okhulele ngaphakathi
Công dụng của cây tía tô “thần dược” của sức khỏe | Hatgiongtihon.net
Cây thủy trúc – Cây thủy sinh có tác dụng lọc nước | Hatgiongtihon.net